साप्ताहिक संवाददाता भाद्र २८, २०७६ १६:००
अबका केही खेलले नेपालको फुटबलले कस्तो दिशा लिने हो भन्ने कुरा तय गर्नेछ । अहिले सारा विश्व फुटबल विश्वकपको छनोटमा अल्झिएको छ र चारैतिर यसको चर्चा छ । दक्षिण एसियाका लगभग सबै देशले विश्वकप छनोट खेलिरहेका छन् र तिनको प्रदर्शनमा पनि यस्तै अन्यौलता पाइन्छ । अहिलेसम्म भएका छनोटका दुई चरणका खेलमा यी दक्षिण एसियाली टिमको प्रदर्शन उतारचढावपूर्ण नै छ । पूरा पढ्नुहोस् »
अक्सनमा खर्चिलो सियारी राइनोज
स्वस्तिक श्रेष्ठ भाद्र २७, २०७६ १३:००
यो प्रतियोगिताका लागि नयाँ टिम सियारी राईनोजले खेलाडी किन्न अक्सनमा सर्वाधिक रकम खर्च गरेको छ । सियारीले १ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खेलाडीमा खर्च गरेको छ । गत वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै उपाधि जितेको लुम्बिनी शाक्य ग्लाडियटर्सले अक्सनमा सबैभन्दा कम रकम खर्च गरेको छ । उसले १ लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पूरा पढ्नुहोस् »
कार्टिन च्याम्पियन सुनिता
नारी संवाददाता भाद्र २७, २०७६ १२:००
भारतको बैंग्लोरस्थित मेको कार्टोपिया रेसिङ ट्रयाकमा सम्पन्न जेके टायर एफएमएससीआई नेसनल कार्टिङ च्याम्पियनसिपअन्तर्गत गल्र्स सलालोम बाइकिङमा नेपालकी सुनिता देशार विजयी भएकी छिन् । देशारले बाइकिङतर्फ उक्त उपाधि हासिल गरेकी हुन् । पूरा पढ्नुहोस् »
अनोज रोक्का भाद्र २६, २०७६ १३:०५
साप्ताहिक संवाददाता भाद्र २५, २०७६ १५:००
मनिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय पदक
नारी संवाददाता भाद्र २५, २०७६ १०:००
साप्ताहिक संवाददाता भाद्र २४, २०७६ १४:००
धेरैले अझै पनि सम्झन्छन्, वसन्त गौचन रोएको दृश्य । काठमाडौंमा भएको आठौं दक्षिण एसियाली खेलकुदको फुटबल फाइनलमा नेपाल पराजित भएपछि वसन्त मैदानमै रोएका थिए । अहिले तिनै वसन्तले फुटबल प्रशिक्षकका रूपमा राम्रै उडान भरिरहेका छन्, त्यो पनि फुटबलमा शक्तिशाली देश जापानमा । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता भाद्र २३, २०७६ ११:३०
नेपाली राष्ट्रिय टिममा फेरि एकपटक पुस्ता हस्तान्तरणको समय आएको छ । केही दिनअघि मात्र नेपालले मलेसियाको सुपर लिग च्याम्पियन जोहार दारुलविरुद्ध खेलेको थियो र त्यसमा विश्वकप छनौटका लागि घोषित टिमका अधिकांश पुराना खेलाडी थिएनन् । त्यसको एउटा कारण थियो, पुराना खास–खास खेलाडीलाई आराम दिइनु । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता भाद्र २२, २०७६ १६:००
ज्ञानेन्द्रले अहिले नेपालले ओमानमा खेल्न लागेको एउटा प्रतियोगिताका लागि आफू उपलब्ध हुन नसक्ने बताएर सबैलाई चकित पारेका छन् । ओमानमा ५ टिमको टी–ट्वान्टी क्रिकेट हुँदैछ । उप–कप्तानको भूमिकामा समेत रहेका ज्ञानेन्द्रले उक्त प्रतियोगिताको पूर्वसन्ध्यामा किन यस्तो निर्णय लिए ? य पूरा पढ्नुहोस् »
नारी संवाददाता भाद्र २१, २०७६ १२:००
पवन आचार्य भाद्र २०, २०७६ ११:१५
साप्ताहिक संवाददाता भाद्र १९, २०७६ १३:००
साप्ताहिक संवाददाता भाद्र १८, २०७६ १६:००
फुटबलको विश्वकप छनौटमा नेपालले आफ्नो पहिलो खेल कुवेतविरुद्ध खेल्नेछ । उक्त खेल भदौ १९ मा कुवेतमै हुनेछ । कुवेतमा धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनीहरूका लागि आफ्नो देशको टिमको खेल हेर्न पाउनु ठूलो अवसर हुन्छ । यस्तोमा अहिलेदेखि नै त्यो खेलको टिकटको माग हुन थालेको छ । पूरा पढ्नुहोस् »
सुजाता मुखिया भाद्र १७, २०७६ १४:००
टेनिसको ग्ल्यामर र क्रेज नबुझ्दै मायांका–माहिका बल र र्‍याकेटसँग खेल्न थालिसकेका थिए । टेनिस सिक्नकै लागि उनीहरू बिहानै न्यानो ओछ्यान छाड्थे । हतार–हतार सातदोबाटोस्थित टेनिस कोर्टमा पुग्थे । कडा प्रशिक्षण लिन्थे तर घरका गुरु भने बुवा नै थिए । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता भाद्र १४, २०७६ १२:००
नेपालको दोस्रो खेल माल्दिभ्सविरुद्ध थियो र कम्तीमा नेपालले त्यसमा राम्रो गर्ने अपेक्षा थियो, तर त्यो पनि देखिएन् । माल्दिभ्सले प्रतियोगिताकै लागि भनेर छ महिनाअघि तयारी सुरु गरेको थियो र त्यसमै टिकेर नेपाललाई हरायो । उक्त हारपछि नेपालको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना समाप्त भएको थियो । त्यही हारका कारण नेपाल पाँचौं स्थानका लागि अफगानिस्तानविरुद्ध खेल्न बाध्य भयो । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता भाद्र ९, २०७६ १८:००
साप्ताहिक संवाददाता भाद्र ८, २०७६ १७:००
साप्ताहिक संवाददाता भाद्र ७, २०७६ १०:००
साप्ताहिक संवाददाता भाद्र ६, २०७६ १६:००
नेपाली भलिबल इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका क्रममा नेपाल भलिबल संघका धेरै कमजोरी देखिए । आयोजकका रूपमा संघले व्यवस्थापन पक्षमा कुनै प्रकारको तयारी नै नगरेको देखियो । पूरा पढ्नुहोस् »
राजु घिसिङ भाद्र २, २०७६ १३:०१
एभीसी एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिप २ भदौदेखि सुरु हुँदै छ, जहाँ सात देशले एक सातासम्म प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । नेपालले आयोजना गरेको सबैभन्दा ठूलो भलिबल प्रतियोगिता हो यो । पूरा पढ्नुहोस् »
प्रकृति दाहाल श्रावण ३१, २०७६ १२:३०
शारीरिक सुगठनमा महिला खेलाडी निकै कम छन् । कडा मेहनत चाहिने र खर्चिलो समेत भएकाले यो क्षेत्रमा भविष्य बनाउनेहरूको संख्या बढ्न सकेको छैन । त्यसमाथि पनि महिलाहरूका लागि यो त्यति आकर्षकको विषय मानिँदैन । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता श्रावण २९, २०७६ १६:००
राजाराम पौडेल श्रावण २८, २०७६ १३:००
मनबहादुर बस्नेत श्रावण २८, २०७६ ११:४०
साप्ताहिक संवाददाता श्रावण २७, २०७६ १७:००
न् २०२० को मार्च ३१ मा यही टिम काठमाडौं आउनेछ र दशरथ रंगशालामा नेपालसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । यस्तोमा एकातर्फ नेपाली खेलाडीले ठूलो टिमसँग खेल्ने अवसर पाउनेछ, किनभने नेपालले सामना गरेका टिममध्ये अस्ट्रेलिया अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्चस्तरको टिम हो । नेपाली दर्शकले पनि आफ्नै आँखाअगाडि अस्ट्रेलियाली टिमको प्रदर्शन हेर्न पाउनेछन् । नेपाली फुटबलका लागि यो ठूलै अवसर हुनेछ । पूरा पढ्नुहोस् »
नारी संवाददाता श्रावण २६, २०७६ १२:०५
सुजिता राष्ट्रिय स्तरका थुप्रै प्रतियोगितामा सहभागी भैसकेकी छिन् । अबको उनको लक्ष्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्टेजमा उभिनु हो । हरेक मानिसको जीवनमा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भएकाले एक्सरसाइज अनिवार्य भएको मानन्धर बताउँछिन् । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता श्रावण २५, २०७६ १७:००
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्काले अर्को उपलब्धि हासिल गरेका छन् । गत बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरीयतामा टि–ट्वान्टीतर्फ पारस खड्काले २५ औं स्थान प्राप्त गरेका छन् । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता श्रावण २४, २०७६ १४:००
साप्ताहिक संवाददाता श्रावण २३, २०७६ १६:००
प्रकाश रानाभाट श्रावण २२, २०७६ १४:००
गोकर्ण गौतम श्रावण २१, २०७६ ११:२१
मल्लिका शाक्य : म्यानपावरदेखि मसलपावरसम्मको यात्रा पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता श्रावण २०, २०७६ १३:००
आयोजकले गरेको हिसाब गलत रहेछ, नेपाल त तेस्रो स्थानमा रहेछ । नेपाल र कतारको समान अंक रहे पनि रेनरेटको आधारमा कतार नै अगाडि रहेछ अर्थात् कतार दोस्रो, अनि मात्र नेपाल । त्यसपछि नेपालले पदक फिर्ता दिनुपर्ने भयो । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता श्रावण १९, २०७६ १५:००
अन्तिम खेलमा नेपाल सिंगापुरसँग पराजित भएपछि प्रशिक्षक उमेश पटवालले पनि माने, टिम ग्लोबल क्वालिफायरमा नपुगेकै राम्रो, किनभने नेपाल त्यसका लागि योग्य छैन । पटवालको नेतृत्वमा खेलिएको यो नै पहिलो प्रतियोगिता हो, उनले त्यसअघि ठूला–ठूला दाबी गरेका थिए, तर अहिले भने उनले पनि मानेका छन्, नेपाली क्रिकेटको स्तर त्यति पुगेको छैन, जसका आधारमा नेपालले ट्वान्टी–२० विश्वकप खेल्न सकोस् । पूरा पढ्नुहोस् »
पवन आचार्य श्रावण १७, २०७६ १२:३५
साप्ताहिक संवाददाता श्रावण १६, २०७६ १२:००
साप्ताहिक संवाददाता श्रावण १५, २०७६ १६:००
साप्ताहिक संवाददाता श्रावण १३, २०७६ १४:००
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेलकुदको माध्यमबाट योगदान दिएका खेलाडी तथा युवा प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप प्रदेश नम्बर–५ सामाजिक विकास मन्त्रालयले नगद तथा प्रशंसापक्रबाट सम्मान गरेको छ । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता श्रावण १२, २०७६ १८:००
शारीरिक सुगठन प्रतियोगितामा विगतको तुलनामा बढी स्पर्धा समावेश गरेर काठमाडौंमा सञ्चालन गरिएको १२ औं दक्षिण एसियाली शारीरिक सुगठन प्रतियोगितामा नेपालले उल्लेखनीय सफलता हात पारेको छ । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता श्रावण ११, २०७६ १४:००
यसपटकको विश्वकपमा पुराना केही स्टारले आफ्नो प्रतिष्ठा अनुसार खेले । केहीले भने आफूप्रति गरिएको आशा–अपेक्षाअनुसार खेल्न सकेनन् । यसपल्टको विश्वकपबाट त्यस्ता केही नयाँ खेलाडी पनि देखिए, जसले अब आउने दिनमा विश्व क्रिकेटमा तहल्का मच्चाउन सक्छन् । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता श्रावण ९, २०७६ १२:००
साप्ताहिक संवाददाता श्रावण ७, २०७६ १९:००
साप्ताहिक संवाददाता श्रावण ६, २०७६ १७:००
साप्ताहिक संवाददाता श्रावण ५, २०७६ १८:००
इंग्ल्यान्डले जसरी यस पटकको विश्वकप जित्यो, त्यसमा धेरैको गुनासो हुनेछ, तर उसले विश्वकप उपाधिसम्म तय गरेको यात्रामा गुनासो गर्ने ठाउँ भने छैन । अझ इंग्ल्यान्डलाई उपाधिको वास्तविक हकदार नै मान्न सकिन्छ । खेलकुदमा दोहोर्‍याएर भनिन्छ, बहादुरलाई मात्र भाग्यले साथ दिन्छ । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता श्रावण ४, २०७६ १२:००
विश्वकप क्रिकेट–२०१९ सुरु हुनुअघि त्यसलाई लिएर धेरै प्रश्न गरिएका थिए । पहिलो प्रश्न इंग्ल्यान्डमा क्रिकेटको खस्कँदो लोकप्रियताका सन्दर्भमा थियो । जुन देशमा क्रिकेटको जन्म भएको छ, त्यही देशमा किन यो खेल युवाहरूको आकर्षणमा पर्न छाड्यो ? दोस्रो प्रश्न, एकदिवसीय क्रिकेटको भविष्यलाई लिएर नै थियो । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता श्रावण १, २०७६ १६:००
पूर्व टेनिस स्टार एना इभानोभिच फेरि एकपटक चर्चामा छिन् । यसपटक उनी खेलका कारण होइन, आमा बन्ने समाचारले चर्चामा आएकी हुन् । एनाले गत शनिबार इन्स्टाग्राममार्फत आफू आमा बन्न लागेको समाचार सार्वजनिक गरेकी थिइन् । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता असार ३०, २०७६ १४:००
साप्ताहिक संवाददाता असार २९, २०७६ १६:००
साप्ताहिक संवाददाता असार २८, २०७६ १४:००
साप्ताहिक संवाददाता असार २८, २०७६ ०९:००
महिला फुटबलमा सबैभन्दा बलियो टिम अमेरिका नै हो, इतिहासले यसै भन्छ । युरोपमा पुरुष फुटबलमा जति पारम्परिक शक्ति छन्, ती सबै महिला फुटबलमा त्यति साह्रो अगाडि छैनन्, एकाध अपवादलाई छाडेर । फ्रान्समा भएको यसपटकको महिला विश्वकपको फाइनलमा अमेरिकाले नेदरल्यान्ड्सलाई २–० ले सजिलै हरायो र कीर्तिमान चौथो पल्ट उपाधि जित्यो । पूरा पढ्नुहोस् »
अनोज रोक्का असार २७, २०७६ १२:००
हङकङमा ४ औँ स्नुकर च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता हुने भएको छ । र्स्पोट क्लब हङकङको आयोजनामा उक्त प्रतियोगिता हुन लागेको हो । हङकङेली नेपाली युवाहरुको सक्रियतामा स्थापना भएको स्पोर्ट क्लबले हरेक बर्ष स्नुकर प्रतियोगिताको आयोजना गरिरहेको छ । पूरा पढ्नुहोस् »